Dowlada yar ee somaliland een adunyadu aqonsan oo noqotay dowlada qudhe qalalasaha iyo dufanada isbadal ka badbaday. Siyaasi Axmed Gobanimo.
Wednesday August 08, 2018 - 03:14:29 in Wararka by Super Admin
Madaxwaynaha cusub ee somaliland ee mudo kayar sanadka dalka xukumayay ayaa kugulaystay inuu kaganshanto dufanada isbadalada iyo qalalasaha geeska africa kabilamay. Isagoo dalka hegan galiyay cidamada amanke laka duwan iyo xududaha dhamantodba waxaa kaloo uu goaan wanagsan kagadhay qalalasihi kililka kadhacay isagoo howlgaliyay hayada barakacayasha iyo dibidajinta si hadii qaxoti dalka soogalan loosoo dhaweyo siduu shegay gudomiyaha hayadasi mudane xinif waxaa kaloo madaxwaynuhu shacbiga ushegay inla ilaliyo qomiyada oromada oo dagal kadhexeyo baryahan danbe sida kadhacday jabuti iyo somaliya arimo aargosiya oromada lagu gaystay hadaba dalka aan laaqonsan ee noqday lambad kadhex iftimaysa geeska africa xaga dimuqradiyada iyo hirgalin xusbiyo badan iyo doroshoyin. Shacbigu codeyo iyadoo dalalka jarkeda aanay awoodin dorosho shacbigu shanti sanaba ciday raban dortan ayaa hadana besha calamku aanay wali aqonsan. Hadaba madaxwayne muse markay isagoo kucusub iyo isbadaladu wada kulmen siduu uga gashantay
Madaxwsyne muse khibrad waynu uleyahay siyasada geeska mudana kusoo dhexjiray isagoo adegsanaya sideganansha ay uu arintan uwaday iyadoo dadbadani mudadan danbe lahayen siyasadi muse ee dibadu way isxidhay ayaa waxaa inoo soo muqata inuu muse talaboyin wayeel wado kuwasoo midha dhalkodu muqdo